काठमाण्डौमा नमोबुद्ध नगरपालिकाको एक जनामा कोरोना पोजेटिभः थप परिक्षण हुँदै – Radio Roshi
काठमाण्डौमा नमोबुद्ध नगरपालिकाको एक जनामा कोरोना पोजेटिभः थप परिक्षण हुँदै
in रोशी खबर / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	April 20, 2020
जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ८ बसोबास गर्ने एक जनामा आर.डि.टि. पोजेटिभ देखिए पनि थप परिक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
आर.डि.टि. गर्दा पोजेटिभ देखिनेमा ६४ वर्षिय सीता अधिकारी छन् । उनि लडेर हड्डीमा समस्या आएको र उपचारका लागि ट्रमा सेन्टरमा लैजादा आर.डि.टि. परिक्षण गर्दा कोरोना देखिएको उनका छोरा विनोद अधिकारीले बताए ।
उनमा कोरोना देखा परेपछि पि.सि.आर. विधिबाट परिक्षण गर्दा भने नेगेटिभ आएको नमोबुद्धका स्वास्थ्य शाखा संयोजक राजु वोगटिले जानकारी दिए ।
यस अघि कोरोना पोजेटिभ देखिएकि महिला नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं २ की हुन् भन्ने खबर आएको र थप बुझ्दा वडा नं ८ को भएको स्वास्थ्य संयोजक वोगटिले जानकारी दिए ।
यस अघि आर.डि.टि. परिक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएकी महिलाको आमा बिदेशबाट आएको र काठमाण्डौ बसोबास गर्दै आएको भनिएकोमा सच्याईएको छ ।